Wallpapers | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
မျက်စိအေး စရာ စိတ်ချမ်းသာ စရာ Live Wallpaper လေး တစ်ခု တင်ပေးလိုက် ပါတယ်ဗျာ။ သူ့ရဲ့ ပုံစံလေးက ညဖက် လရောင် အောက်မှာ ရှိတဲ့ သဘာဝ အလှ အပ ရှုခင်းလေးကို သက်ဝင် လှုပ်ရှား နေတဲ့ Live Wallpaper တစ်ခု အဖြစ် ဖန်တီးထား တာဖြစ် ပါတယ်။
ကောင်းကင်ပေါ်မှာ ကြယ်ရောင်တွေ တောက်ပ နေတဲ့ မြင်ကွင်း အပြင် တိမ်တိုက်တွေ ကလည်း အတော်လေးကို လှပတာကို မြင်တွေ့ ရမှာဖြစ် ပါတယ်။
Android OS 2.2 နှင့် အထက် ဖုန်းများမှာ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကဏ္ဍ Android, Phone Application, Wallpapers
Samsung Galaxy S6 နဲ့ S6 Edge တုို့မှာ သုံးထားတဲ့ Wallpaper တွေကုို လုိုလျင် သူတွေ အတွက်
Samsung Galaxy S6 နဲ့ S6 Edge တို့မှာ Built-in ပါဝင် လာတဲ့ Wallpaper တွေကုို တခြား ဖုန်းတွေမှာ Wallpaper အဖြစ် အသုံးပြု လုိုသူတွေ အတွက် Samsung Galaxy S6 & S6 Edge Stock Wallpaper တွေကုို တင်ပေး လုိုက် ပါတယ်။
အောက်က link မှာ Download ရယူနုိုင် ပါပြီ။
▼ Wallpaper တွေကုို ဒေါင်းလော့ ရယူရန် ▼
ဒီနေ့တော့ Android user တွေ အတွက် Wallpaper လေးကို လက်ဆောင် အဖြစ် အားလုံး အတွက် တင်ပေး လိုက် ပါတယ်။
အပေါ်က နာမည်လေးနဲ့ ပုံလေးကို မြင်တာနဲ့ Samsung ကုမဏီမှာ နောက်ဆုံး ထုတ်ကုန် အဖြစ် တစ် ဟုန်ထိုး နာမည် ကြီး နေတဲ့ Android Version Lollipop ဆိုတာကို အားလုံး သတိထား မိကြ မှာပါ။
မမြင်ချင်လည်း မြင်နေရ မကိုင်ချင်လည်း ကိုင်နေရတဲ့ မိမိ ဖုန်းလေး ထဲမှ ပုံပျက် ပန်းပျက်နဲ့ စတိုင် ဆိုတာလည်း မရှိ
စမတ် ဆိုတာလည်း မမြင် ရတဲ့ ဖုန်းရဲ့ Wallpaper အစုတ် ကြီးကို Evolution လုပ်ပြီး ကဲ Material Design ကို အခြေခံ ရေးဆွဲ ထားတဲ့ Lollipop ရဲ့ Wallpaper လေးနဲ့ ရွက်လွှင့် ကြည့်လိုက် ပါဦး
ဒီ Wallpaper လေးဟာ သင့်ဖုန်းရဲ့ Screen Resolution ပမာဏကို 192x192 XXX-HDPI ဖြင့် တည်ဆောက် ထားသည့် အပြင် 750+ vector designed icons အဖြစ် စပါယ်ရှယ် ရေးဆွဲ ထားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အခု တလော လူကြို က်များ နေတဲ့ Nova, Apex, ADW, Smart, Unicon, Action Launcher, Aviate, Go Launcher, Next, and Holo launcher တို့ ကိုလည်း အထောက် အပံ့ပေး ထားသည့် အတွက် Wallpaper အတွက်
အကောင်း ဆုံးနဲ့ အလန်းဆုံး ဆိုတာကို သင် ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
- အောက်မှာ ပေးထားတဲ့ လင့်များမှ Apk လေးကို အရင် ဒေါင်းလော့ ရယူ လိုက်ပါ။
- ပြီးရင် ဖုန်းမှာ အင်စတော လုပ်လိုက်ပါ။
- အင်စတောလုပ်ပြီးတဲ့အခါ Apk လေးကို ဖွင့်လိုက်ပါ။
- Apk လေးပွင့်လာတဲ့အခါ "Apply Theme" ဆိုတာကို တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။
- မိမိအသုံးပြု လိုတဲ့ launcher သို့မဟုတ် Wallpaper လေးကို တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါ။
- အားလုံးစိတ်ကြို က်ဖြစ်ရင်တော့ Set as Wallpaper ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ။
4.0.3 အထက် ဖုန်း အားလုံးမှာ အသုံးပြုနိုင် ပါတယ်။
3D Valentine Heart Magic PRO v1.0
Valentines Day အတွက် နောက်ထပ် 3D Valentine Heart Magic PRO ဆိုတဲ့ Live Wallpaper
လေး တစ်ခုကို ထပ်ပြီး တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။
ဒီ live wallpaper လေး ကတော့ အသည်း ပုံလေးနဲ့ ဖြစ်ပြီး ဖုန်းကို shake လိုက်တာနဲ့ နှင်းတွေ
ကျလာသလို တလက်လက်နဲ့ ဖြာထွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Pro version ဖြစ်သာကြောင့် play store မှာဆိုရင် ပိုက်ဆံပေး ဝယ်ရမှာ ဖြစ်ပြီး အောက်မှာ free
file size 9.4MB ရှိပြီး android 2.2 ကစပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
It is PRO version with full colors, no ADS, noshare or join us pages. Thank you for your choise!!!
It is most Beautifull Heart 3D Valentine card you ever seen. It is shining with stars and parallax effect. You can change colors.
If you want to see magic - shake it for few seconds.
We believe that hearts will never brakes. And love will last forever.
3D Valentine Heart Magic PRO v1.0 ကိုအောက်မှာ Free Download ရယူနိုင်ပါတယ်
From : 3D Valentine Heart Magic PRO v1.0
ပန်းရောင်ကို ကြိုက်သူများ အတွက် မိမိ ဖုန်းရဲ့ Theme ကို ပန်းရောင်လေးနဲ့ အလှဆင် ချင်တယ်
ဆိုရင်တော့.Pink Flower Live WallPaper apk ကို ဒေါင်းယူ ထားလိုက်ကြ ပါဗျာ...
ဒီApps မှာ ပါတာတွေကို အနည်းငယ်ပြောရရင်တော့..ရွေးချယ်စရာအနေဖြင့်..Wallpaper ၆ ပုံ
ပါဝင် ပါတယ်.. ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ပုံကို ရွေးမယ် ဆိုရင်တော့ အောက်ပါ ညွှန်းထားတဲ့ အတိုင်း
၁)ဒေါင်းလုပ် ဆွဲပြီးတဲ့ နောက် App ကို ဖွင့်လိုက်ပါ..ဖွင့်ပြီး နောက်တော့..set wallpaper ရယ်..
နောက်တစ်ခုက More Live Wallpaper ရယ် ဆိုပြီး နှစ်ခုတွေ့ ပါလိမ့်မယ်..
၂) Set Wallpaper ကို ကလစ် လိုက်ပါ..တစ်ကယ်လို့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ပုံကို ရွေးချင်သေးတယ်
ဆိုရင်တော့...set Wallpaper ကို မကလစ်ပဲ..Setting ဆိုတာကို ကလစ်ပါ..
၃) Background နှင့် Object Speed တွေ့ရင်..Background ဆိုတာကို ကလစ်ပါ...ပြီးရင် Back
ground1,2,3,4,5, ဆိုပြီး ကျလာလိမ့်မယ်..ကိုယ်ကြိုက်တာ တစ်ခုကို..ရွေးလိုက်ပါ...
အမြင် တစ်မျိုး ဆန်းတဲ့ Smoke Live Wallpaper
Android users တွေ အတွက် ရောင်စုံ အငွေ့ လေးတွေ ထွက်နေတဲ့ ဒီဖိုင်း Smoke Live Wallpaper
လေးပါ ကာလာတွေ လန်းပြီး ဒီဇိုင်းတွေ အရမ်း မိုက်လို့ တင်ပေးလိုက် ပါတယ် ခင်ဗျ ... ။
Smoke Live Wallpaper, beautiful abstract smoke background with floating particles.
Requires AndroidAndroid 2.3.3 or higher
☺ရေအောက် ကမ္ဘာမှ ငါး အလှလေးများ - aniPet Aquarium Live Wallpaper v2.5 Apk
ထွေထွေ ထူးထူးတော့ မဟုတ်ပါ ဘူးဗျာ Android User တွေ အတွက် Live Wallpaper လှလှလေး
တစ်ခုရ ထားလို့ တင်ပေးလိုက် တာပါ။ ပင်လယ်ရေအောက် ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ အလှမွေးငါးလေးတွေနဲ့
သမုဒ္ဒယာ ကြမ်းပြင်ရဲ့ သဘာဝ အလှရှုခင်းတို့ကို Live Wallpaper တစ်ခုအဖြစ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်
မိမိရဲ့ ဖုန်းထဲမှာ Live Wallpaper အဖြစ် ထားထား မယ်ဆိုရင် မျက်စိအေးပြီး ကြည့်နူးစရာလေး
တွေပေါ့။ အလှမွေး ငါးလေးတွေကိုလည်း မိမိသဘောကျတဲ့ ငါးလေးတွေကိုပဲရွေးချယ်ပြီးထည့်
ငါးလေးတွေ ကလည်းအစုံပါပဲ Live Wallpaper ရဲ့ နမူနာပုံစံကို အောက်မှာ Screen Shot တွေပြ
Android OS 2.1 နှင့်အထက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
နာမည်ကြီး လူကြိုက်များတဲ့ Galaxy S5 Live Wallpaper လေးပါ အရမ်းလန်းတဲ့ ဒီဇိုင်းလေးမို့
Galaxy S5 Live Wallpaper ကိုမှ ကြိုက်တဲ့ ဘော်ဒါတွေ အောက်မှာ ဒေါင်းယူ နိုင်ပါတယ်။
Live Wallpaper ကို စိတ်ကြိုက် ဖန်တီးနိုင်မယ့် - Wave Live Wallpaper v3.11 APK
Android User တွေ အတွက် Live Wallpaper မတင်ပေးရတာ တစ်ပတ်ကျော် လောက်ရှိ သွားပြီထင်တယ်ဗျာ။
အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Live Wallpaper လေးကလည်း အတော်လေးတော့ လန်းတယ်ဗျာ။ ကိုယ်တိုင် စိတ်ကြိုက်
Wave တွေကို Animation တွေအနေနဲ့ မိမိထည့်ချင်တဲ့ Color တွေ စတိုင်တွေ ကို Live Wallpaper တစ်ခုဖန်တီး
ပြီး ကြိုက်ပြီဆိုရင်တော့ မိမိ Screen ပေါ်တင်နိုင်ပြီပေါ့ ဗျာ။
အောက်မှာနမူနာ Wave များကို Screen Shot ပြထားပါတယ်ဗျာ။
Android OS 2.1 နှင့် အထက် ဖုန်းများမှာ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါ တယ်ဗျာ။
Pyae Phyo (MMiTD) by Pyae Phyo (MMiTD)